Ndege yeCameroon Airlines yakarwisa panguva yekumhara panhandare yeBamenda
Location: musha » Kutumira » Airlines » Ndege yeCameroon Airlines yakarwisa panguva yekumhara panhandare yeBamenda
Ndege yeCameroon Airlines yakarwisa panguva yekumhara muBamenda airport
A Cameroon Airlines (Camair-Co) ndege dzevanotakura dzakapinda mumoto vachisvika panhandare yendege muCameroon ine mhirizhonga.
Ndege iyi yaigadzirira kumhara munhandare yendege yeBamenda kuNorth West Region yenyika payakarwiswa nevarume vane pfuti.
Mutyairi akakwanisa kumhara ndege zvakachengeteka uye pakanga pasina vekukuvara, akadaro mutakuri mune chirevo. "Nekuda kwehushingi hwemukuru wendege, ndege iyi yakakwanisa kumhara zvakanaka kunyangwe yakakanganisa fuselage yayo," yakadaro. Cameroon Airlines iri kuongorora kukuvara kwendege.
Vapanduki vanoparadzanisa vanotaura Chirungu kumadokero kweCameroon vanga vachirwa nemauto kubvira 2017, vachitsvaga kutanga nyika yakazvimiririra inonzi Ambazonia.
Iyo Cameroon Airlines Corporation, inotengesa seCamair-Co, inendege inobva kuCameroon, inoshanda seyekutakura mureza wenyika.
Heathrow anoburitsa yepamusoro mibvunzo yemafaro mubereki wese anofanira kugadzirira paKisimusi
Profit streak inoenderera kuMiddle East neNorth Africa mahotera